घट्यो गौराको रौनक- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर नेटवर्कसाइन अप
फेसबुकबाट साइन अप
तपाईंको खाता पहिले देखि छ ? लगइन गर्नुहोस् ।
समाचार संग्रह गर्नको लागि लग इन गर्नुहोस् ।
तपाईंको अंक ?
नेपालको मनोरम हिमश्रृंखला अवलोकनको भाग्यशाली अवसर
नतिजा हेर्नको लागि लगइन गर्नुहोस् ।
पासवर्ड बिर्सनुभयो ?
तपाईंको खाता छैन ? साइन अप गर्नुहोस् ।
विज्ञान र प्रविधि
Set language to English
सबै सुचना तथा लिंक नेपालीमा हेर्नुहोस्
कान्तिपुर नेटवर्कसँग आवद्ध हुनुभएकोमा धन्यवाद ।
तपाईको प्रतिक्रिया समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन ।
घट्यो गौराको रौनक
कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै भएकाले यस क्षेत्रको प्रमुख चाड भईकन पनि उल्लास कम
भाद्र १५, २०७८ भवानी भट्ट, तृप्ति शाही
कञ्चनपुर/बैतडी — चोकचोकमा देउडा गाउँदा–नाच्दा बजारै गुञ्जायमान हुन्थ्यो । राति अबेरसम्म पनि स्थानीय समूह–समूहमा देउडामा रमाएका भेटिन्थे । नयाँ लत्ताकपडादेखि अन्य सरसामान किनमेल गर्नेको भीडले बजारमा समेत चहलपहल बढ्थ्यो ।
ग्रामीण भेगमा पनि उस्तै रौनक छाउँथ्यो । तर कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले यस क्षेत्रको प्रमुख चाड भइकन पनि यसपल्ट गौराको उतिसारो उल्लास छैन । गत वर्ष पनि गौरा सुनसानमै बितेको थियो । कोरोना महामारीका अलावा बदलिँदो परिवेश, नयाँ पुस्तामा संस्कृतिप्रतिको लगावको कमी र मिश्रित बजारिया समाज आदिका कारण चाडपर्वहरूको मौलिकपन हराउँदै गएको छ ।
गौरा पर्वको मुख्य दिन सोमबार अधिकांश आ–आफ्ना घरमै सीमित भए । गौरा मनाउन मन्दिर पुग्ने संख्या न्यून थियो । घरमै पनि परिवारबाहेकका आफन्तको भीड देखिएन । अधिकांशले आ–आफ्नो घरमै पूजाआजा गरेर पर्व मनाएका हुन् । ‘जताततै कोरोनाको त्रास छ, यस्तो बेला भीडभाडमा जानुभन्दा घरमै गौरा मनायौं,’ भीमदत्त नगरपालिका–१५ की रमादेवी भट्टले भनिन्, ‘परिवारका सबैले एकै ठाउँमा पूजाआजा गर्‍यौं ।’
स्थानीय प्रशासनले पनि कोरोना संक्रमण विस्तार रोक्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पर्व मनाउन अनुरोध गरेको थियो । ‘खुलेर उत्सव मनाउन सकिने अवस्था छैन, त्यही भएर गौरा खल्लो लाग्यो,’ साहित्यकार वीरबहादुर चन्दले भने, ‘सबैले घर–घरै मनाउन थालेका छन्, त्यो राम्रो पनि हो ।’ गौरा मात्रै नभई अन्य चाडपर्वमा पनि विगतको जस्तो रौनक नरहेको उनले सुनाए ।
अघिल्ला वर्षहरूमा गौरा सुरु हुनुभन्दा एक साताअगाडिदेखि नै महेन्द्रनगरका चोक–चोकमा विभिन्न संघसंस्थाले देउडा गायन आयोजना गर्थे । गत वर्षदेखि यो क्रम रोकिएको छ । यस्तोमा देउडियाहरूले आफ्नो कलासमेत प्रस्तुत गर्ने ठाउँ पाउन सकेका छैनन् । ‘डेउडा गायकहरूले आफ्नो कला देखाउने थलो नै गौरा हो,’ डेउडा गायक लालबहादुर धामीले भने, ‘त्यो खेल दुई वर्षदेखि बन्द छ ।’ उनले गत वर्षदेखि गौरा आए–गएको समेत थाहा नहुने अवस्था आएको बताए ।
साहित्यकार नारा जोशीलाई हरेक वर्ष गौरा मनाउने तरिकाहरू फेरिँदै गएको लाग्छ । बदलिँदो परिवेश तथा परिस्थितिअनुसार पुरानो र नयाँ पुस्ताले आ–आफ्नै शैलीले मनाउन थालेको उनले बताए । ‘पाठ्यपुस्तक फेरिए जस्तै गौराका पाना पनि फरक–फरक हुन थालेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त फेसबुक र टिकटकका लागि मात्रै गौरा मनाएजस्तो देखिन थालेको छ ।’ जसका कारण गौराको मौलिकता हराउँदै गएको उनको बुझाइ छ ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दसैं र तिहारलाई भन्दा गौरा बढी महत्व दिइन्छ । कामको खोजीमा वा अध्ययनका लागि भारतलगायत मुलुक र अन्य जिल्लामा भएकाहरू पनि गौरा मनाउनकै लागि घर फर्किन्थे । अहिले यसरी फर्किनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेन । कोरोना महामारीले धेरैको आर्थिक र सामाजिक अवस्थासमेत प्रभावित पारेकाले गौरा मनाउने तरिकासमेत फेरिएको देखिन्छ ।
कसरी मनाइन्छ ?
भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन गहुँ, गहत, मास, गुराउस र सानो केराउसहितको बिरुडा भिजाउने गरिन्छ । यही दिनदेखि गौराको सुरुवात हुन्छ । षष्ठीका दिन बिरुडा धोइन्छ । सप्तमीका दिन यही बिरुडाले गौरा पूजन गरिन्छ । अष्टमीका दिन पनि गौरा र दुर्वाष्टमीको पूजा गरिन्छ । अष्टमी भदौ २१ पछि पर्न गए त्यसभन्दा अगाडि कृष्ण अष्टमीकै दिन गौरा मनाइन्छ । भदौ २१ पछि अगस्ती तारा उदय हुने भएकाले त्यसभन्दा अगाडि नै गौरा मनाउनु पर्ने संस्कृतिविद् लक्ष्मीकान्त जोशी बताउँछन् ।
उनका अनुसार शुक्लपक्षमा मनाइने गौरालाई उज्याली र कृष्ण पक्षमा मनाइने गौरालाई अँध्यारी गौरा भनिन्छ । नयाँ व्रतालुले अँध्यारो गौराको व्रत बस्नु उपयुक्त मानिँदैन । ‘सप्तमीका दिन गौरा पूजा र अष्टमीका दिन दुर्वाष्टमी मनाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अगस्ती तारा उदयपछि दुर्वाष्टमी मनाउनु हुँदैन ।’ गौरा व्रत बस्दा सन्तान नहुने महिलालाई सन्तान प्राप्ति र श्रीमान्को दिर्घायु हुने पौराणीक मान्यता छ । उनी भन्छन्, ‘महिलाले अमुक्ताभरण (आवरणबाट अमुक्त हुन) पनि गौरा मनाउँछन् ।’
बैतडीमा भने धुमधाम
कोरोना महामारीका बीच बैतडीमा गौरा पर्व धुमधामसँंग मनाइएको छ । गौराको मुख्य दिन सोमबार महिलाहरूले नजिकका शिव मन्दिरमा जम्मा भई गौरी देवीको पूजाआजा गरेका छन् । महिला र पुरुष मिलेर देउडा पनि गाउने–नाच्ने गरे ।
दशरथचन्द नगरपालिका–४ देवलहाटको शिव मन्दिरमा सयौंको संख्यामा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको थियो । अधिकांश मास्कबिनै उपस्थित थिए । भौतिक दूरी पालनामा न दर्शनार्थी न मन्दिर व्यवस्थापन समितिले नै चासो देखाएको थियो । उपस्थित भएका धेरै जना त रमाइलो हेर्न आएका थिए । आफूहरूको मुख्य पर्व भएकोले पनि कोरोनाले रोक्न नसकेको दशरथचन्द–४ की शान्ति चन्दले बताइन् । ‘हाम्रा लागि दसैं तिहारभन्दा गौराको ठूलो महत्व छ । धार्मिक आस्थाका कारण रोगको समेत डर नमानेर गौरा मनायौं,’ उनले भनिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने केही दिनअघि गौरा पर्वमा भीडभाड नगर्न आग्रह गरेको थियो । यसो गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो । तर सयौंको संख्यामा भेला भएर पर्व मनाइए पनि प्रशासन बेखवर बन्यो । सदरमुकामभित्रै ठाउँ–ठाउँमा भीड र मेला लागेको थियो । तर प्रहरीले भीड व्यवस्थापन र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कुनै चासो दिएको थिएन ।
गौरादेवीको विशेष पूजाआजा गरी विवाहित महिलाले दुबधागो ग्रहण गरेका छन् । पञ्चमीको दिन घरमा भिजाएका पाँच प्रकारका अन्न मास, गहुँ, केराउ, गहत र गुराउस पनि ग्रहण गरेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ ११:४२
नाका बन्दले रोक्यो वारिपारि बिहे
मंसिर ४, २०७७ भवानी भट्ट, तृप्ति शाही
कञ्‍चनपुर, बैतडी — भारत उत्तराखण्डको टनकपुरका मोहनचन्द्र पाठक भाइ जीवनको जन्ती लिएर मंगलबार गड्डाचौकी नाकामा पुगे । बैतडीको खोड्पे जाने जन्ती दिउँसोसम्म नाकामै अलपत्र पर्‍यो । चम्पावतका जिल्ला अधिकारीको सिफारिससहित पुगेका उनीहरू दिउँसो मात्रै नेपाल भित्रिए । पीसीआर परीक्षणसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर मात्रै जन्तीलाई भित्रिन दिइएको हो ।
‘डीएमको सिफारिससहित आएका छौं, यताबाट पीसीआर मागिरहेका छन्,’ पाठकले भने, ‘आधाजतिले त पीसीआर रिपोर्ट पनि बोकेका छन् ।’ राति विवाह गरेर बुधबार जन्ती फर्किसकेको छ । दिउँसै बिहेको लगन भए पनि नाकामा अल्झिँदा राति भएको पाठकले बताए । उनले नाकामा पुगेकामध्ये केही जन्ती पनि फिर्ता पठाएको बताए । कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका–३ का महेश चन्दका भाइहरू उत्तराखण्डकै खटिमामा बस्छन् । खटिमामै बस्ने भतिजाको विवाह नेपालतर्फ तय भएको छ । तर उनलाई पनि नाका बन्द हुँदा जन्ती कसरी ल्याउने भन्ने अन्योल छ । भीमदत्त नगरपालिकाको हल्दुखाल आउने जन्तीलाई कसरी ल्याउने भनेर उनी जनप्रतिनिधिहरूसँग सोधिरहेका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा वारिपारि विवाहको चलन पुस्तौंदेखिको हो । विगतको तुलनामा हालका वर्षमा यो चलन केही कम भए पनि यस वर्ष लकडाउन र नाका बन्द हुँदा झनै समस्या भएको छ ।
गत वर्ष नै निश्चित भएको विवाह पनि नाका बन्द हुँदा रोकिएको छ । ‘भतिजाको विवाह वैशाखमै गर्ने तयारी थियो, त्यतिबेला लकडाउनले आउनजानै पाइएन,’ चन्दले भने, ‘अहिले पनि नाकामा आउजाउ गर्न गाह्रो भएकाले कसरी जन्ती ल्याउने भन्ने भइरहेको छ ।’ उनका भतिजाको विवाह मंसिर दोस्रो साताका लागि तय गरिएको छ ।
भारतबाट आउनमात्रै होइन, भारततर्फ जन्ती जान पनि विभिन्न झमेलाहरू छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिससँगै सीमित संख्यामा जन्ती लैजान पाउने गरिएको छ । अहिले जिल्ला प्रशासनमा भारततर्फ जन्ती जानका लागि तीनवटा सिफारिस माग गरिएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले बताए । ‘सामाजिक कार्य भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउने जन्तीलाई आउनजान दिने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट आउने जन्तीका लागि भने हामीले पीसीआर अनिवार्य भनेका छौं ।’
उनका अनुसार मंगलबार भित्रिएको जन्तीमा पनि अधिकांशको पीसीआर गरिएको थियो । पीसीआर परीक्षण नभएकालाई नाकाबाटै फिर्ता पठाइएको उनले बताए । कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ देखि नाकामा आउजाउ असहज छ । त्यहीबेलादेखि बिहेबारीलगायत अन्य सामाजिक कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । वारिपारि विवाह भएका छोरीबेटीहरूले पनि चाडपर्वका समयमा आउजाउ गर्न पाएका छैनन् । ‘भाइटीकाका लागि माइत जाने भनेको आधार कार्ड वा सिफारिस माग्न थाले,’ सीमावर्ती बजार खटिमामा माइत भएकी भीमदत्त–६ वनगाउँकी पार्वतीदेवी चन्दले भनिन्, ‘सानैमा बिहे भयो, हामीसँग आधार कार्ड कहाँबाट हुन्छ ?’ पछिल्लो समय रोजगारीसँगै उपचार र पेन्सनका लागि जानेहरूलाई जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा जान दिने गरिएको छ ।
७ महिनादेखि रोकिए बिहे
बैतडीको दशरथचन्द–१० खडेनीकी भावना बुडालको गत वैशाखमै बिहे पक्का थियो । सीमापारि भारतको पिथौरागढ जिल्लाबाट हात माग्न केटा पक्ष आएपछि परिवारले फागुनमै छोरी दिने पक्का गरेका थिए । चैतमा कोरोना भाइरसको जोखिमले गर्दा नेपाल–भारत दुवैतर्फ लकडाउन भएसँगै बैतडीको सीमानाका झुलाघाटको पुल बन्द भयो । बिहे पनि रोकियो । वैशाखमा तय भएको बिहे पुल खुल्ला र गरौंला भन्दा उनको परिवार छोरीको बिहेका लागि कुरिरहेको ७ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।
घरबाटै टिकोटालो गरेर छोरी अन्माउने योजना बनाएको परिवार अहिले निराश छ । महिनौंसम्म छोरीको बिहे रोकिँदा नरमाइलो लागेको आमा शान्ति बुडालले भनिन् । पारिबाट केटापक्षले ट्युबबाट नदी तरेर भए पनि बिहे गर्न पर्‍यो भन्न थालेको उनले बताइन् । दुई छोरी र एक छोरामध्येकी जेठी भएकाले पनि धुमधामसँग बिहे गर्ने योजना रहेको उनले सुनाइन् । ‘यही पुल बन्दले सपना पूरा हुन देलाजस्तो छैन । तर मनमा आशा छ । छोरीको बिहे छिटै गर्न पाउँछु कि भन्ने,’ उनी भन्छिन् । भारतसँग सीमा जोडिएको दशरथचन्द नगरपालिकाको महाकाली नदी आसपासका गाउँबस्ती र तल्लोस्वराड क्षेत्रको पञ्चेश्वर, शिवनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयको बिहेबारी धेरैजसो पारि भारतीय क्षेत्रमै हुने गरेको छ । उनीहरूका इष्टमित्र र आफन्तहरू उतैतिर घरजम गरी बसेका धेरै भएको पञ्चेश्वर–२ का वडाध्यक्ष दशरथ मंगोलाले बताए ।
जिल्लामा अन्य क्षेत्रबाट पनि भारतीय गाउँमा बिहेबारी हुने गरेको छ । दशरचन्द–४ की रेश्मा भुलको बिहे पनि भारतको पिथौरागढमा गत वैशाखमै गर्ने तयारी थियो । चार वर्षअघि नै कुराकानी भएको बिहेको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । चैतबाट कोरोनाको जोखिमका कारण झुलाघाटको पुल बन्द भएपछि उनको बिहे पनि रोकिएको छ ।
‘धेरै महिना भइसक्यो । अब त समस्या हुने भयो । पक्का भएको बिहे लामो समय भइसक्यो । अलि अघि गर्ने भनेर प्रशासनमा कुरा राखेका थियौं । यताबाट सीडीओ सरले बिहेका लागि सहयोग गरौंला भन्नुभयो । तर उताको डीएमले नमानेकाले भएन,’ दिदी लक्ष्मीले भनिन् । उनले फेरि केही दिनअघि प्रशासनमा कुरा गरेको बताइन् । उनीहरू सीमा पुलको ढोका खुल्ला र छोराछोरीको बिहे गरौंला भन्ने आशामा बसेका छन् । आफ्नो गाउँका २/४ बिहे पनि रोकिएको दशरथचन्द–४ की वडासदस्य पार्वती भुलले बताइन् । उनका अनुसार यस्ता धेरै बिहेहरू रोकिएका छन् । बिरामी, परीक्षार्थी, बिहेबारीसँगै अन्य पारिवारिक समस्याका निवेदन बोकेर वारिपारि गर्न माग गर्दै दिनहुँ निवेदन आउन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माथिल्लो निकायमा नाका खोल्ने अनुमति दिन माग गरेको थियो ।
आपत्मा परेका र अत्यावश्यक कामका लागि आउजाउ गर्न दिन प्रशासनलाई आएको निर्देशन भारतीय डीएम कार्यालयलाई पठाए पनि उताबाट जवाफ नआएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बाताए । उनका अनुसार पिथौरागढ जिल्लाका डीएमसँगको सहकार्यमा आपत्मै परेकालाई पुलबाट आवतजावत गर्न दिइएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर ४, २०७७ ०८:००
थप केही सुदूरपश्चिमबाट
पहिरोमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई राहत
बाढीपहिरोले विद्युत् अवरुद्ध हुँदा जिल्ला अस्पतालमा उपचार समस्या
दिउँसै गोठमा छिरेर बाघले चौपाया मारेर खान थालेपछि ...
हप्ता दिनदेखि अँध्यारोमा अस्पताल
‘घर त फर्कियौं, अब के खाने ?’
बिरामी पर्न थाले बाढीपीडित
Top Deals on Daraz
Free Shipping | Order Now
Shop Now for Free Gift
Lotto Sports Sneakers
Order now | Get Free Shipping
जलवायु सम्मेलनमा नेपालका मुद्दा
अङ्गराज तिमिल्सिना कार्तिक ९, २०७८
कोरोना भाइरसको संकटकै बीच मानवजातिले जलवायु परिवर्तनको अभूतपूर्व चुनौतीको पनि सामना गरिरहेको छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनको २६औं विश्व सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरीय...
‘मिसन जिरो हंगर’ र सप्पा नेपाली
सरिता तिवारी कार्तिक ९, २०७८
भोक निम्नवित्तीय आम नेपालीजनको साझा रोग हो । हामी नेपालीका दुःख कतिसम्मका छन् भने, सस्तो र अदक्ष श्रम बेच्नै सही, कसै गरी खाडी मुलुकसम्म भए पनि...
देश र जनताप्रति बोधो राजनीति
भीम रावल कार्तिक ९, २०७८
जनउत्तरदायी प्रणालीमा राजनीतिको अर्थ नै जनता एवम् देशको हित र सेवा हो । यही मान्यताअनुरूप राज्यको कर्तव्य जनताको कल्याण, राष्ट्रिय हित र देशको सुरक्षा गर्नु हो ।...
सम्पादकीय कार्तिक ९, २०७८
करिब एक वर्षअघि एकै पटक झन्डै ४ सय अस्पतालको शिलान्यास हुनु आफैंमा उत्साहलाग्दो खबर थियो । विडम्बना भन्नुपर्छ— त्यो उत्साह उदेकमा परिणत हुन धेरै समय लागेन ।...
आम निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य
विपिन अधिकारी कार्तिक ८, २०७८
आजका मितिमा मुलुकसमक्ष सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक एजेन्डा भनेको आम निर्वाचन नै हो । विभिन्न राजनीतिक कारणले करिब तीन महिनाअघि विकल्पका रूपमा वर्तमान सरकारको गठन भए...
आशा–निराशामिश्रित सय दिन
अर्जुननरसिंह केसी कार्तिक ८, २०७८
राजनीतिमा सय दिन पनि एक युग हुन सक्छ भन्ने मान्यताले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा सरकारको पहिलो सय दिन अर्थात् ‘मधुमास’ उसको सामर्थ्य चिन्ने, भावी कार्यदिशाबारे आशाको...
शृंखलाबद्ध दलित–हत्या : जात व्यवस्थाको दुष्परिणाम
परशुराम रम्तेल कार्तिक ८, २०७८
नेपाली समाजमा शताब्दिऔंदेखि दलित समुदायलाई शूद्र र अछुतको श्रेणीमा राखेर गरिँदै आएको छुवाछुत, विभेद र अमानवीयताको पराकाष्ठाको पछिल्लो दृष्टान्त हो— चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या ।
यमुना पराजुली अधिकारी कार्तिक ८, २०७८
मेरी साथीकी छोरी गाउँमा बस्ने आफन्तकहाँ गएकी थिइन् । फर्केपछि उनले ‘मामु, मैले चिउरा फल्ने रूख देखें नि !’ भनिछन् । यो प्रसंग मलाई सुनाउँदै गर्दा, साथी...
थुनुवा मृत्युको उचित अनुसन्धान होस्
सम्पादकीय कार्तिक ८, २०७८
प्रहरी हिरासतभित्र शृंखलाबद्ध रूपमा थुनुवाको मृत्यु भइरहनु दुःखद मात्र होइन, चिन्ताको विषय पनि हो । कतिपय घटनामा थुनुवाले आत्महत्या गरेको दाबी प्रहरीको भए पनि मृतकका आफन्तहरू...
कानुनी राज्यको मृगतृष्णा
भास्कर गौतम कार्तिक ७, २०७८
नेपाल सर्वसाधारणका लागि न्याय हराएको देश हो । समग्र कानुनी क्षेत्र ऐतिहासिक रूपमै वर्चस्वशालीले दुरुपयोग गर्ने हतियार अद्यापि रहिरहेको छ । अहिले स्थानीय सत्ता र केन्द्रीय सत्तामा...
तथ्यांकमा कोभिड - १९ [अपडेट]
पूर्ण खोप प्राप्त ६,८३३,६२९,९२४
पूर्ण खोप प्राप्त ६६,४७,३२२
अपडेटः मंगलबार, ९ कात्तिक, २०७८ । ०९ : १५ बजे
स्रोत : https://coronavirus.jhu.edu/map.html विस्तृतमा हेर्नुहोस् »
१३औं साग खेलकुद
स्थानीय निर्वाचन २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
क्रिकेट विश्वकप - २०१९
यो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ।
पूरा पढ्नुहोस् »
विज्ञापन - पत्रिका
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लि.
© Copyright ekantipur.com